Play Store မှဂူဂဲလ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပိုင်းဖြင့်ခွဲထားသည် Androidsis
Play Store မှအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုသီးခြားစီစမ်းသပ်သည်
ဟုတ်ကဲ့! နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Google သည် Google Play Store တွင်အချိန်အကြာကြီးရှိသင့်သည့် option တစ်ခု၏စမ်းသပ်မှုများနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကြောင်း, သောရှုပ်ထွေးကိုငါသိ၏ အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းနှစ်ခုစလုံးသည်ရောထွေးနေသည် Play Store တွင်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှု မှလွဲ၍ မည်သည့်နေရာတွင်မျှ ဦး တည်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဂိမ်းများကိုကစားသောအခါအကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းကိုတောင်မ ၀ င်နိုင်သူအချို့ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေသည်။ ထို့ကြောင့်အရာရာတိုင်းချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အပြည့်အဝသွားလျှင်၊ ဒီ post ၏။
နောက်ဆုံးတွင် Google သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုအက်ပ်များမှခွဲထုတ်နေသည် အသစ်တခု interface ကို နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြားအပိုင်း။ အပေါ်ပိုင်းတွင်အက်ပ်များ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ find ကိုသင်ယခုရှာတွေ့နိုင်သည့်နေရာတွင်ဗွီဒီယိုဂိမ်းကဏ္itselfများနှင့်လျှောက်လွှာအတွက်အတိအကျကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
ယခု ဤအပိုင်းများခွဲလိမ့်မည် အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဂိမ်းများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနှင့်စာအုပ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ မျှဝေထားသည့်ပုံများတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းကဏ္ section သစ်သည်၎င်း၏ပထမအဆင့်တွင်ရှိနေသေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဘေးဘက်အညွှန်းဘောင်တွင် Apps နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်တွဲဖက်မှုရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင်မှန်းဆနိုင်သည့်အတိုင်း၊ ဤအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ်လာမည် ဆာဗာဘက်မှPlay Store မှနောက်ဆုံးပေါ် APK ကိုသင် install လုပ်ထားလျှင်ပင်၊ ထိုကွဲပြားခြားနားမှုကိုရယူနိုင်ရန်ဂူဂဲလ်ကိုဒေသအားလုံးသို့ဖြန့်ကျက်ရန်စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။
သတင်းရယူနေဆဲဖြစ်သော Google Play စတိုး အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် ၎င်းသည် Android ထုတ်ကုန်တစ်ခုပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနောက်ဆုံးသတင်းများအများဆုံးရရှိခဲ့သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် third-party developer များအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Google သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုမဆိုရှာဖွေသည့်အခါအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုကမ်းလှမ်းရန်စိတ်ဝင်စားသည်။ အပူရောက်ရှိသောအသစ်အဆန်း ဒီ၏အခြား.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Play Store မှအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုသီးခြားစီစမ်းသပ်သည်
နောက်တစ်ပတ်ပိုကီမွန်၏ဒုတိယမျိုးဆက်ကို Niantic ကြေငြာမည်
ယခုသင် Google Play Store မှ 4K ရုပ်ရှင်များကြည့်နိုင်သည်